90 Arday oo dhamaysay Dugsiga Hoose/Dhexe ee Cabdiladiif Bilaal Qardho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / 90 Arday oo dhamaysay Dugsiga Hoose/Dhexe ee Cabdiladiif Bilaal Qardho.
April 20, 2019 - By: Mohamud Nadif
Xafladaan oo si heersare ah loosoo qaban qaabiyay ayaa lagu sagootinayay 90 arday oo dhamaysatay waxbarashada dugsiga Hoose/Dhexe, Maamulka Wabarashada heer Degmo, Maamulka iyo Macalimiinta Iskuulka, Waalidiin, Arday iyo marti sharaf kala duwan ayaana ka qaybgashay.
Faarax Ciise Axmed maamulaha dugsiga Bilaal oo ugu horayn goobta ka hadlay waxa uu ka warbixiyay marxaladaha uu soo maray dugsigaan isagoona sheegay in iskoolka uu sanadkii hore kaalin wayn kasoo hoyay imtixaankii dugsiyada dhexe ee Wasaarada Waxbarashada Puntland ay qaaday.
Qaar ka mid ah waalidiinta iyo marti sharaf ka soo qaybgalay munaasabada waxay ardayda ku bogaadiyeen heerkan ay maanta soo gaareen, iyagoona ka codsaday in dadaaladooda halkaas kasii wadaan.
Masuuliyiintii kasoo qaybgalay munaasabada ayaa hambalyo u diray 90ka arday ee qalanjabisay sidoo kalena waxa ay mahadnaq u direen mudada ay waalidiinta soo barbaarinayeen.
Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Qardho Siciid Maxamed Faahiye waxa uu maamulka iyo ardayda iskoolka CabdiLadiif ku amaaneen sida ay isugu duubanyihiin waxa uuna dardaaran u diray ardayda qalanjabineysa iyo waalidka iskuulka.